Raw Orlistat Powder (96829-58-2) Ndị na-emepụta - Phcoker Chemical
Raw Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ eji agwọ oke ibu. Isi ọrụ ya na-egbochi nsị nke abụba site na nri mmadụ….
ikike: 1470kg / ọnwa
Mpempe akwụkwọ nhazi Orlistat (96829-58-2) video
Raw Orlistat ntụ ntụ dị na klas nke ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi lipase nke na-arụ ọrụ site na igbochi absorption nke 25% nke abụba na nri ma jiri ya maka ụkọ ọnwụ na ndị okenye buru oke ibu, 18 afọ na okenye, mgbe ejiri ya na calorie belatara na obere abụba nri. Raw Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ e mere iji na-emeso oke ibu. Ọrụ ya bụ isi na-egbochi nsị nke abụba site na nri mmadụ, si otú a na-ebelata oriri caloric. Raw Orlistat ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na igbochi pancreatic lipase, enzyme nke na-agbaji triglycerides na eriri afọ. Na-enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịkụnye ya hydrolyzed ka ọ bụrụ nke nwere mmanụ na-enweghị mmanụ ma wepụ ya. A na-eji ntụ ntụ Orlistat edebanye aha na ndị buru oke ibu nke nwekwara ike ịnwe ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọrịa obi. Dị irè nke Raw Orlistat ntụ ntụ n'ịkwalite ọnwụ dị arọ bụ obere ma dị obi umeala. Nchịkọta data sitere na ọnwụnwa ahụike na-egosi na ndị mmadụ nyere Raw Orlistat ntụ ntụ na mgbakwunye na mgbanwe ndụ, dị ka nri na mmega ahụ, tụfuru ihe dịka kilogram 2-3 (4.4-6.6 lb) karịa ndị na-a notụ ọgwụ ahụ n'ime otu afọ. Raw Orlistat ntụ ntụ na-ejikwa obi umeala belata ọbara mgbali ma gosipụta igbochi mmalite nke ọrịa shuga 2, ma ọ bụ site na nhalata ya ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ. Ọ na-ebelata nsogbu ụdị ọrịa shuga nke Abụọ na ndị buru oke ibu karịa otu mgbanwe mgbanwe ndụ na-eme.
Mpempe akwụkwọ Orlistat (96829-58-2) Nkọwapụta
Product Name Azu akwukwo akwukwo ozo
Chemical Aha Tetrahydrolipstatin, 1-((3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl)dodecyl-2-formamido-4-methylvalerate
Klaasị ọgwụ ọjọọ ndị na-emepụta lipase
molekụla Fnhazi C29H53NO5
molekụla Wasatọ 495.745 g / mol
Mgbu Point <50 Celsius
Ọkara Ndụ nke Ndụ Dabere na data a kpaara ókè, ọkara ndụ nke Raw Orlistat ntụ ntụ bụ nke dị na 1 ruo 2 awa.
nchekwa Tigwe nchekwa tem. 2-8 ° C
Antinye Jiri na-emeso oke ibu.
Orlistat Raw uzuzu (96829-58-2) Nkọwa
Umu Orlistat ntụ ntụ bụ n'ime ọgwụ ndị a na-akpọ ndị na-emechi lipase nke na-arụ ọrụ site na igbochi absorption nke 25% nke abụba na nri ma jiri ya maka ọnwụ ọnwụ na ndị buru oke ibu, 18 afọ na okenye, mgbe ejiri ya na obere kalori na nri dị ala.
Orlistat ntụ ntụ bụ ọgwụ a na-eme iji na-emeso oke ibu. Isi ọrụ ya bụ igbochi nsị nke abụba si nri mmadụ, si otú a belata ihe oriri caloric. Akpa Ugwu Orlistat na-arụ ọrụ site n'imebi pancreatic lipase, enzyme nke na-akụda triglycerides na eriri afọ. Enweghị enzyme a, a na-egbochi triglycerides site na nri ka a ghara ịmịnye ya hydrolyzed n'ime acy fatty acids na-adịghị emetụta ya ma bụrụ nke a na-enweghị atụ. A na-eji ntụpọ ma ọ bụ Listlist ntụ ntụ mee ihe na ndị buru oke ibu bụ ndị nwere ike ịnwe ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọrịa obi. Ịdị irè nke ngwugwu ma ọ bụ Listat ntụ ntụ iji kwalite ọnwụ ọnwụ bụ ihe doro anya ma dị mma. Achọpụta data site na ọnwụnwa na-egosi na ndị mmadụ nyere Raw Orlistat ntụ ntụ na mgbakwunye na mgbanwe ndụ, dịka nri na mmega, hapụ ihe 2-3 kilograms (4.4-6.6 lb) karịa ndị na-adịghị aṅụ ọgwụ n'oge ọ bụla n'afọ. Mpempe akwụkwọ nhazi Orlistat jiri nwayọọ mee ka ebelata ọbara mgbali elu ma yie ka ọ ga-egbochi mmalite nke ọrịa 2, ma ọ bụ site na ọnwụ ọnwụ ma ọ bụ mmetụta ndị ọzọ. Ọ na-ebelata ụdị ọrịa shuga nke ụdị ọrịa shuga nke abụọ n'ime ndị mmadụ buru oke ibu n'otu ego nke mgbanwe ndụ.
Orlistat uzuzu (96829-58-2) Ngosipụta nke Action
Orlistat ntụ ntụ bụ ụdị lipase na-egbochi ọgwụ ọnwụ ma ọ bụ ihe na-emepụta hydrated nke lipostatin. Orlistat n'ụzọ dị irè ma jiri aka na-egbochi lipase afọ na pancreatic lipase, ebe ọ na-enweghị mmetụta na enzymes ndị ọzọ na-agbari nri (dị ka amylase, trypsin na chymotrypsin) na phospholipase, ọ naghị emetụta nsị nke carbohydrates, protein na phospholipids. Ọgwụ a adịghị etinye obi gị dum n'agbanyeghị na akụkụ eriri afọ ma nwee mmetụta na-emechi emechi na lipase. Orlistat deactivates enzymes site na covalent na-ejikọ nseta serine na saịtị ndị na-arụ ọrụ nke afọ na pancreatic lipase. Nke a na - egbochi abụba dị na nri ka ọ ghara ịkụpịa ya na abụba bara uru na diacylglycerol, yabụ enweghị ike itinye uche ya, belata nri caloric ma yabụ na - achịkwa ibu ahụ. Ogwu a ekwesighi ka aru mmadu dum tinye obi ya iji mee ihe. Ọrụ ọgwụ nke Orlistat bụ ọgwụ dabere: usoro ọgwụgwọ nke Orlistat (120mg / d, tid, were nri), yana nri obere kalori, nwere ike belata ruo 30% nke ntinye abụba. N'ime nnyocha na-atụle ndị ọrụ afọ ofufo nkịtị na ndị buru oke ibu, Orlistat enweghị isi na-adịghị ahụ ahụ ma ọlị ma nwee obere ọbara. Mgbe otu onu ogwu onu ogugu (nke kachasi bu 800mg), onu ogugu nke Orlistat na 8 nke na-esote bu <5 ng / ml. Dị ka ọ na-adị, usoro ọgwụgwọ nke Orlistat na-etinye obere ahụ n'ahụ ma ọ gaghị agbakọta na oge ọgwụgwọ dị mkpirikpi. N'ime nnwale in vitro, ọnụọgụ Orlistat ya na protein ndị ọzọ karịrị 99% (protein ndị ejikọtara bụ lipoproteins na albumin), ọnụego njikọ ya na mkpụrụ ndụ ọbara uhie dị obere.
Uru nke Orlistat ntụ ntụ (96829-58-2)
Orlistat na-ebelata ozu ahụ ihe karịrị 20% na-efu abụba ahụ
L Orlista na-enyere gị aka ịmụ etu esi agụ calorie
Orlista na-eme ka obi dị gị mma
Orlista nwere nsonaazụ dị mma na-enye ndị ọrụ obi ike na ọ joyụ
Orlista na-enye nsonaazụ na-adigide ogologo oge
Orlista na-ebelata njọ nke ọrịa dịka hypotension, ọrịa shuga, atherosclerosis na
Akwadoro Orlistat uzuzu (96829-58-2) Ogwu
Ụdị edozi Orlistat ntụ ntụ bụ 120-mg capsule ugboro atọ kwa ụbọchị na nri ọ bụla nwere abụba (n'oge ma ọ bụ ruo 1 hour mgbe nri). Achọpụtaghị ihe dị elu karịa 120 mg ugboro atọ kwa ụbọchị iji nyekwuo uru.
Ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-eri nri edozi, nke dị ntakịrị-calorie nke nwere ihe dịka 30% nke calorie si abụba. A na-ekesa ihe oriri ụbọchị nke abụba, carbohydrate, na protein ga-eri nri atọ. Ọ bụrụ na nri furu efu mgbe ụfọdụ ma ọ bụ enweghị abụba, a ga-ewepụ mkpụrụ nke Orlistat ntụ ntụ.
Ebe ọ bụ na egosiputa ntụ ntụ Orlistat iji belata nsị nke ụfọdụ vitamin na abụba soluble na betacarotene, a ga-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha were multivitamin nwere vitamin na-soluble vitamin iji hụ na nri zuru oke. N'akụkụ, a ga-ewere vitamin mgbakwunye ma ọ dịkarịa ala 2 awa tupu ma ọ bụ mgbe nchịkwa nke ntụ ntụ Orlistat, dịka n'oge ụra.
Mmetụta dị na ntụpọ Orlistat (96829-58-2)
Ọ bụ ihe dị mma ịhụpụta mmetụta dị na Orlistat ntụ ntụ mgbe ị na-eji ya. Ị nwere ike ịnweta ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ maọbụ ọ bụghị dịka mgbe ị gụsịrị ọgwụ ọ bụla ọzọ. Imirikiti ihe ndị na-abịa site n'iji Orlistat ntụ ntụ mee ihe metụtara ụzọ o si arụ ọrụ n'ime usoro nsị gị. Ha na-adịkarị nwayọọ ma na-eme mgbe niile mgbe ịmalitere ọgwụgwọ ahụ. Ha na-eme mgbe ị nwesịrị nri buru ibu. N'ụzọ dị mwute, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha na-apụ ka ọgwụgwọ ahụ na-aga n'ihu ma na-esokwa nri kwesịrị ekwesị.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ:
▲ isi ọwụwa
▲ Abdominal mgbu / discomfor
▲ Ịnye mmanu mmanu
▲ Ọkpụkpụ abụba
▲ Akpụkpọ anụ dị ọkụ
▲ Back mgbu
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gafee ihe ọ bụla n'ime mmetụta ndị a, ị kwesịrị ị na-emeso ya dịka ihe mberede ma kpọọ dọkịta ozugbo. Ha bụ;
▲ Oké mgbu mgbu nke na-adịghị apụ.
▲ Hives ma ọ bụ ịbịcha ya
▲ O siri ike ilo
▲ ike iku ume